21 / 09 / 2017 | RayHaber | raillynews
Maalinta: Sebtember 21, 2017
Sultan LF waxay keeni doontaa neef cusub ee gaadiidka rakaabka magaalada
Awooddeeda R & D, 50 waxay ku guuleysatay dambas fara badan suuqa baska in ka badan hal sano, Otokar wuxuu sii wadaa inuu dejiyo isbeddellada gaadiidka rakaabka ee magaalooyinka. Alaabooyin fara badan oo loogu talagalay baahiyo kaladuwan [More ...]
Kala hadal wadahadal ku saabsan saldhiga tareenka ee Ataturk Park
Bartamaha magaalada Gumushane waxaa dhisay Duqa mudada Sebahattin Aytaç Ataturk Park sanadkii 1965, dhamaadka doodii ku saabsan saldhiga gaariga fiilada la dhigay. U xaree mitirrada 30 geeska beerta adoo horay u jiidaya [More ...]
Duqa Degmada Yilmaz: Mashruuca Cas Samsun Logistics wuxuu kaa badbaadin doonaa inta badan ee Magaalada
Duqa Magaalada Samsun ee Dawlada Hoose Yusuf Ziya Yilmaz, dhismaha qiimaynta socota ee Tuulada Saadka ayaa ka soo qayb gashay kulanka. Duqa Magaalada Samsun Yuusuf Ziya Yılmaz, 40 ee Dawlada Hoose [More ...]
GaadiidkaPark ee Magaalada Kobaneli Magaalo-Weyne wuxuu bilaabaa khadka 250G ee u dhexeeya Gebze iyo Sabiha Gökçen Airport. Gaadiidka Xariiqda 250G, oo ku xirnaan doonta Beerta Nasashada, waxay ku taalaa inta u dhaxeysa Saldhigga Baska Gebze iyo Sabiha Gökçen Airport Isniinta Oktoobar. [More ...]
Ka gudba wadada Tram Line ee Mevlana Street ee Stop Point
Marka laga gudbo khadka taraamka, waxaa jira dhibaato cusub maalin walba Mevlana Street. Inta lagu jiro maalinta, taraafikada inta badan waddooyinka ayaa loo xiraa waxay u baahan tahay in lagu garaaco madaxa. Alaaddin-Adliye Tram kaas oo ka mid ah mashaariicda muhiimka ah ee Konya [More ...]
Qorshaha Mashruuca Gaadiidka Gaadiidka Kayseri Dhameystiray
Wefti ka socda Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta ayaa u yimid Kayseri khadka Khadka Nidaamka Raadinta Belsin-YHT. Dowlada Hoose ee Magaalada Kayseri ayaa soo gaba gabeysay Qorshaha Masterka Gaadiidka ee mustaqbalka Kayseri. Laga soo bilaabo Wasaaradda Gaadiidka, Arrimaha Badda iyo Isgaarsiinta [More ...]
Maxay dumarka ku yaal magaalada Bursa ay ka fakarayaan 'gaari casaan'?
Waa suurtagal in la arko in dadka Bursa ay ka buuxaan doonnooyinkan rag iyo dumarba leh, inkasta oo irdaha baabuurta ee loo qoondeeyey joogsiyada lagu calaamadeeyay inay yihiin mudnaanta koowaad ee gaari-wadashada haweenka. Dadka intiisa badan oo lahadlayay BBC-da afka turkiga oo ku safray gaariyo casaan ah, [More ...]
Tareen iyo Adapazari
Xarumaha maanta aan lagamamaarmaanka u ahayn waqtiga degdegga ah iyo qulqulka sine ee aan ahayn magaalooyinkii marayay tareenka itibaren Laga bilaabo 1856, tareenka, kulanka iyo kulanka [More ...]
Gaadiidka tareenka ee loo yaqaan 'Filyos-Zonguldak TCDD' ee Zonguldak, oo ah tareenka rakaabka ee ka tirsan dareenka darawalka tareenka ayaa waxaa badbaadiyey darawalka tareenka. Marka loo eego macluumaadka la helay; 19 wuxuu dhacay fiidkii Sebtember. aadaab [More ...]
Kaydka TCDD ee Joojiyay Iskuduwaha IZBAN
Dabka ayaa ka kacay bakhaarka TCDD ee ku yaal xarunta Hilal Metro ee ku taal İzmir. IZBAN waxaa loo joojiyey dabka ka kacay waardiyaha [More ...]
Laga soo bilaabo Aykut Gül qalinka, gaadiidka ardayda xadiidka Bursa. Isha gaadiidka ee Bursa waa shaki la'aan nidaamyada tareenka. Gaar ahaan safarada metro waxay yareeyaan isku socodka gaadiidka dadweynaha magaalada kalabar. Intaa waxaa dheer, metroo ilaa bartilmaameedka [More ...]
RayHaber 21.09.2017 Warbixinta Shirka
Kursiga Kursiga iyo Kaararka Waddada waxaa loo gadan doonaa YHT Qaybaha.
U saxiixay marxaladda sadexaad ee ANTRAY
Duqa Magaalada Antalya ee Magaalada Caasimadda ah Menderes Turel, oo ka qeyb galay kulanka Golaha Xisbiga Antalya ee Antalya, ayaa sheegay in mashaariicda himilooyinku ay yihiin maalgashi kordhin doona qiimaha Antalya. Gaadiidka Antalya oo wata mashruucyo cusub waxayna shaqeysaa midkasta [More ...]